Ikwesiri ka ahia ahia isiokwu n’enweghi olu? | Martech Zone
Monday, December 10, 2012 Monday, December 10, 2012 Douglas Karr
Keywords bụ asụsụ ndị mmadụ na-ahụkarị n ’olile anya gị, webusaiti gị na nsonaazụ nchọta achọtara na ha. Ha dị mkpa n’ ihi mkpa ha nwere na ịtụgharị. Maka saịtị dị ka Martech, isiokwu ndị sara mbara nwere ike ịdị mkpa iji mee ka nleta. Mana nke ahụ bụ naanị n'ihi na nleta na ewu ewu zuru oke bụ ebumnuche nke blog a.
Maka azụmahịa gị, nleta ekwesịghị ịbụ ihe ngosi izizi nke saịtị gị, ọ kwesịrị ịbụ nke gị mgbanwe. Ọtụtụ oge, isiokwu ndị na-atọghata dị iche na nke na-emegharị okporo ụzọ. Nnyocha nke ọtụtụ ụlọ ọrụ njikarịcha achọpụtala na, ọ bụ ezie na nnukwu ogo na ogo ọchụchọ dị elu, otu isiokwu nwere ike ịchụpụ ọtụtụ puku nleta… a ogologo-ọdụ ahịrịokwu nke 3 ruo 4 okwu nwere ike ịmegharị ọtụtụ ntụgharị ndị ọzọ.
Kedu maka isiokwu ndị na - enweghị olu ọchụchọ? Tupu anyị azaa ya, anyị kwesịrị ikwu nke ahụ enweghị olu ọchụchọ dị ka Google si kọọ. Fọrọ nke nta ka isiokwu ọ bụla dị mkpa ma ọ bụ ahịrịokwu nwere ụdị olu… ọbụlagodi na ọ bụ naanị nchọnchọ ole na ole kwa ọnwa.
Otu n'ime ndị ahịa anyị bụ Right On Interactive - ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ọ bụghị naanị ijide ndị na-eduga kama ka ịbawanye uru nke ndị ahịa ọ bụla. Mgbe ha na-akọwa azụmaahịa ha na atụmanya, ahịrịokwu ahụ ahịa ahịa ndụ kọwara ya mfe karịa ndị ọzọ na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ ahịrịokwu zuru oke maka azụmaahịa ha, ịzụ ahịa ndụ ndị ahịa enweghị olu ọchụchọ mgbe anyị malitere iso ha rụọ ọrụ otu afọ gara aga.
Anyị enyeghị ndụmọdụ aka nri ịkwụsị ahịa na isiokwu ahụ, n'agbanyeghị. Ọ bụ ahịrịokwu na-akpali akpali na ọ dị mkpa maka akara ha ma nwee ike ịbụ okwu agbasatara ebe niile n'ọdịnihu. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe merenụ. Cyclere ahịa ndụ ndị ahịa bụ okwu na-eto eto ma na ewu ewu ma na olu ọchụchọ. Enwere ugbu a ihe karịrị nyocha 30 kwa ọnwa maka okwu ahụ. Ma maa onye nọ n'ọkwá maka ya?
Edobela mkparịta ụka na saịtị gị naanị na mkpụrụokwu na-ewu ewu na ahịrịokwu nwere oke ọchụchọ! Jiri nkebi ahịrịokwu ọ bụla dị dị mkpa na azụmahịa gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ na-eme otu nleta! O nwere ike ịbụ na isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu ga-eme ka ntụgharị gbanwee na mmụba ya… ọ bụghị olu. Kasị mma, ọ bụrụ na mpịakọta ọchụchọ dị ala… eleghị anya ị gaghị asọ mpi maka trafịkị ahụ!
Tags: olu isiokwuKeywordsn'aka nrinri na mmekọrịta
Nchịkọta nchịkọta nwere ike iduhie gị
Dee 19, 2012 na 6: 19 AM
Enwere ụdị ndụmọdụ dị iche iche gbasara isiokwu. Na esemokwu, kwa. Maka m ihe kpatara nkebi ahịrịokwu ogologo-ọdụ na-akwalite mgbanwe ndị ọzọ bụ n'ihi na mgbe ị pịnyere nchọta ahụ akọwapụtara, ị meela mkpebi ịzụta.